VLC bụ na-a na-ewu ewu video ọkpụkpọ, ekele ya ala nke iji ya na ime mgbanwe. Ọ bụ ihe na-emeghe iyi omume na-agba ụfọdụ ihe ndị kasị nkịtị video formats, gụnyere .flv, ahụkarị format ị ga-ahụ na Vimeo na YouTube. Ị pụrụ ọbụna iji ya ụfọdụ mfe mgbanwe na-egwu na fim na 3D.
A bụ otú na-egwu 3D nkiri na VLC. Malite site mmeghe gị VLC ọkpụkpọ, mgbe ahụ, clicks Ngwaọrụ na toolbar.
Ọzọ, pịa mmetụta na nzacha. Site na menu, pịa Video mmetụta.
Ozugbo ị pịrị na Video mmetụta ị ga-wee pịa na Vout / machie. E nwere Checkmark esote Wall ị ga mkpa pịa, dị ka ị na-ahụ na ihe oyiyi n'okpuru. Ị ga-achọ nwere ahịrị setịpụrụ na-3 na ogidi setịpụrụ na-2. Ozugbo ị mere gị selections, ị nwere ike ugbu a na-ahụ VLC na-egosi na multiple windows. Buru otu n'ime windows, enlarge ya ihuenyo zuru, na ị ga na-ekiri gị nkiri na 3D.
Ị nwere ike megharịa akụkụ ruru maka playback, kwa. Ẹkedori gị VLC ọkpụkpọ, wee pịa Ngwaọrụ, mgbe ahụ, Mmasị. Pịa na Gosi All Ntọala na ị ga-ahụ na ala nke ihuenyo. Ịnyagharịa ka Video ngalaba, pịa Custom akụkụ ruru na ịgbanwe ya 32: 9. Mechie VLC na Malitegharịa ekwentị usoro ihe omume.
Ọzọ, laghachi Ngwaọrụ menu, pịa mmetụta na nzacha, na mgbe ahụ Video mmetụta. Site n'ebe ahụ, họrọ n'Ubi na-etinye na 960ox maka uru na nri. Ahụ na-aga na menu na pịa Video, mgbe ahụ na akụkụ ruru. Ịgbanwe nke a kwa 32: 9, na ị ga-họrọ 1920 X 816 n'ihi na gị na ihuenyo mkpebi mwube maka kasị mma foto mma. N'ezie nweta ihe kasị mma mmetụta, ị kwesịrị 3D iko, kwa, na ezi laptọọpụ ma ọ bụ ileba anya na ihuenyo.
Nke ahụ bụ nnọọ otú mfe ọ bụ na-ekiri VLC 3D fim. A ole na ole clicks na ị na na na ụzọ gị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata otú na-egwu 2D fim, dị nnọọ ẹkedori gị VLC ọkpụkpọ, họrọ ndise àgwà ị chọrọ ele ya na, na-amalite na-ekiri.
E nwere ihe ụzọ ọzọ na-egwu nkiri na kọmputa gị, na nke ahụ bụ site na iji Wondershare Video Converter Ultimate. Ị nwere ike igwu ma 2D na 3D nkiri na ya ma ọ bụ tọghata video ka 3D mfe.
Otu nke oké ihe banyere Wondershare bụ na ọ bụ nnọọ vasatail. Ọ bụ ike na-egwu a nnukwu agwaogwa nke video formats, ya ka ị ghara nwere ike iche banyere inwe otu ọkpụkpọ maka .mp4 na ọzọ maka WMA. Ọ na-ekere ọkọlọtọ definition video, HD video na ọdịyo faịlụ na ala. Ị nwekwara ike igwu ndepụta okwu na gị video iji ịnyịnya ibu, SSA, ma ọ bụ SRT (Advanced SubStation Alfa na SubStation Alpha, ma ọ bụ SubRip Text).
Desktọpụ nsụgharị nke software ekwe ka DVD playback nakwa dị ka vidiyo ị ike ma ọ bụ download. Nwetara a nkiri ị gbara onwe gị na gị na smartphone? Nsogbu adịghị. Ọ bụ na unu nkiri a ngụsị akwụkwọ na nso nso na gị camcorder? Wondershare Nwere ike kpọọ ya, kwa.
Ụfọdụ ndị ọzọ oké atụmatụ gụnyere na usoro ihe omume-ekwe ka ị na-egwu na vidiyo si na nchekwa ma ọ bụrụ na ị na-adịghị chọrọ ịchọ online. I nwekwara ike ime ka onye na n'ehihie ntụrụndụ site na-etinye ọnụ a playlist na dị nnọọ na-eme na-aga ekele na-aga n'ihu play. Kwesịrị ịhapụ a video? Wondershare Player Pụrụ icheta ebe ị hapụrụ gawa ma bulie akpọ n'ebe ahụ.
N'ihi ya, e na ị nwere ya - abụọ mfe ụzọ na-ele gị videos ụzọ gị ọ bụla na ngwaọrụ. Ị nwere ike ịkekọrịta ha, akpali ha, ma ọ bụ nanị na-ekiri ha. Were gị vidiyo na gị ma ọ bụ na-ele ha n'ụlọ - ọ bụ ihe niile gị.
Top 15 YouTube 3D Videos maka Kids
Olee otú Hapụ Download 3D Movies maka 3D TV
Ise Okenye Versions nke VLC
> Resource> VLC> Olee otú iji Play 3D Movies na VLC